Luis Garcia: ‘Jurgen Klopp wuxuu u baahan yahay koob uu kula guuleysto Liverpool.” | Radio Himilo
Home / Habka-Nolosha / Luis Garcia: ‘Jurgen Klopp wuxuu u baahan yahay koob uu kula guuleysto Liverpool.”
Luis Garcia: ‘Jurgen Klopp wuxuu u baahan yahay koob uu kula guuleysto Liverpool.”
Muqdisho – Weeraryahankii hore ee Liverpool, Luis Garcia ayaa sheegay in macalin Jurgen Klopp uu cadaadis saaran yahay isla markaana laga doonayo in uu soo gabagabeeyo waqtiga badan ee Reds aysan ku guuleysan wax koob ah.
Tan iyo markii uu Jarmalka ka yimid bishii October sanadkii 2015, Liverpool ayaa gaartay labada Final ee koobabka EFL iyo Europa League kahor inta aysan qasaaro kala kulmin kooxaha Manchester City iyo Sevilla.
Klopp ayaa sidoo kale ka caawiyay kooxda ka dhisan gobolka Merseyside inay dib ugu soo laabato Champions League, laakiin Garcia ayaa soo jeediyay in macalinkan u dhashay Jarmalku inuu u baahan yahay inuu koob ku guuleysto waqtigiisa Anfield.
39 jirkan ayay kasoo xigatay The Sun isagoo dhahaya: “Waxa uu joogay muddo labo sano ah, waxaan qabaa inuu shaqo fiican qabanayo.”
“Waxa uu keenay qaar ka mid ah ciyaartoydii uu doonayay, haatan waa waqtigii isaga u muujin lahaa inay kooxdu diyaar u tahay inay wajahdo wax walba.”
Liverpool ayaa markii ugu dambeysay ku guuleysatay EFL xagaagii 2011-12, markaas oo ay ku soo badiyeen Cardiff City ciyaar la isla gaaray gool-kulaad.
Previous: Atletico oo ku niyadsan soo xero-gelinta laacibka Chelsea, Diego Costa.
Next: Macalin Arsene Wenger: ‘Alexis Sanchez ma ahan mid daalan.’